समय झन्-झन् छोट्टिँदैछ भन्‍ने के तँलाई थाहा छ? त्यसकारण, छोटो अवधिमा, तैँले ममा भरोसा गर्नुपर्छ र मेरो स्वभावसँग नमिल्‍ने सबै कुरालाई तँबाट पन्छ्याउनुपर्छ: अज्ञानता, प्रतिक्रिया दिनमा ढिलाइ गर्ने बानी, अस्पष्ट विचारहरू, कोमल-हृदय, कमजोर इच्‍छा, मूर्खता, अतिरंजित भावनाहरू, अन्योलता, र भेदशक्तिको कमी। यी कुराहरूलाई जति सक्दो चाँडो हटाउनुपर्छ। म सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर हुँ! जबसम्‍म तँ मसँग सहकार्य गर्न इच्‍छुक हुन्छस्, तबसम्‍म म तँलाई समस्यामा पार्ने सबै कुरालाई समाधान गर्न सक्छु। म मानिसहरूको हृदयको गहिराइ देख्‍न सक्‍ने परमेश्‍वर हुँ; मलाई तिमीहरूका सबै रोगहरू र तिमीहरूका खराबीहरू कहाँ छन् भन्‍ने सबै थाहा छ। यी कुराहरू तिमीहरूलाई जीवनमा अघि बढ्नबाट रोक्‍ने कुराहरू हुन्, र तिनलाई तुरुन्तै हटाइनुपर्छ। नत्र भने, तँमा मेरो इच्‍छालाई अघि बढाउन सकिनेछैन। मैले प्रकाशित गर्ने तँमा भएको सबै कुरालाई त्याग्‍नको लागि ममाथि भरोसा गर्, सधैँ मद्वारा जिऊ, मेरो नजिक बस्, र मेरै अनुरूपमा सबै काम र बानीबेहोरालाई अघि बढा। तैँले नबुझ्ने कुराको बारेमा मसँग धेरैजसो बारम्‍बार सङ्गति गर्, अनि तँ अगाडि बढ्न सक्‍ने गरी म तँलाई अगुवाइ गर्नेछु। यदि तँ अनिश्‍चित छस् भने, हतारमा काम नगर्, तर मेरो समयको प्रतीक्षा गर्। आफ्‍नो स्वभावलाई स्थिर राख् र तेरो जोसलाई घरी तातो र घरी चिसो हुन नदे; तँसँग मलाई सधैँ आदरसाथ हेर्ने हृदय हुनुपर्छ। तैँले मेरो अघि र मेरो नजरभन्दा बाहिर जे गर्छस् त्यो सधैँ मेरै इच्‍छा अनुरूप हुनुपर्छ। मेरो खातिर कसैसँग पनि उदार नबन्, चाहे त्यो तेरो पति होस् वा तेरो परिवार; तिनीहरू जति नै असल भए पनि यस्तो कुरा स्वीकार्य हुँदैन। तैँले सत्यता अनुरूप नै काम गर्नुपर्छ। यदि तँ मलाई प्रेम गर्छस् भने, म तँलाई महान् आशिषहरू दिनेछु। विरोध गर्ने कसैलाई पनि म सहनेछैन। मैले प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्, र मैले घृणा गर्नेहरूलाई घृणा गर्। कुनै पनि मानिस, घटना, वा कुरालाई ध्यान नदे। तेरो आत्माद्वारा हेर् अनि मैले प्रयोग गर्ने मानिसहरूलाई स्पष्ट रूपमा देख्; आत्मिक मानिसहरूसँग अझै बारम्‍बार सम्पर्कमा बस्। अज्ञानी नबन्—तैँले कुराहरू छुट्याउनैपर्छ। गहूँ सधैँ गहूँ नै हुनेछ, अनि सामा कहिल्यै पनि गहूँ भई हुर्कनेछैन—तैँले फरक-फरक प्रकारका मानिसहरूलाई पहिचान गर्नैपर्छ। तँ आफ्‍नो बोली-वचनमा विशेष होशियार हुनुपर्छ र तैँले आफ्‍नो पाइलालाई मैले चाहेको मार्गमा नै राख्‍नुपर्छ। यी सबै वचनहरूलाई ध्यान दिएर विचार गर्। तैँले तेरो विद्रोहीपनलाई तुरुन्तै त्याग्‍नुपर्छ र मेरो प्रयोगयोग्य बन्‍नुपर्छ, ताकि तैँले मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्।